Epreli 21 yiGoogle's Mobilegedden! Uluhlu lwakho lokuKhangela kwi-SEO eshukumayo | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 13, 2015 NgeCawa, ngo-Epreli 12, 2015 Douglas Karr
Siyoyika? Hayi, akunjalo. Ndiyoyika ukuba iisayithi ezingakhange zilungiselelwe ukusetyenziswa kwefowuni sele zinengxaki yokunxibelelana komsebenzisi kunye nokuzibandakanya. Ngoku uGoogle ubamba nje ngokuhlaziya ii-algorithms zokuvuza iisayithi ezilungiselelwe umsebenzisi oselfowuni onenqanaba elikhulu kuphando lweselfowuni.
Ukuqala nge-21 ka-Epreli, siya kwandisa ukusebenzisa kwethu ubuchule obuhamba-hamba njengophawu lokuma. Olu tshintsho luza kuchaphazela uphendlo olushukumayo kuzo zonke iilwimi kwihlabathi liphela kwaye luya kuba nefuthe elibonakalayo kwiziphumo zethu zokukhangela. Ngenxa yoko, abasebenzisi baya kukufumanisa kulula ukufumana iziphumo ezifanelekileyo, ezikumgangatho ophezulu ezilungiselelwe izixhobo zabo. Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle
Le ntshukumo iyavakala xa ubuza kum… hayi ngempela le ngongoma wonke uyakhala malunga nomzi mveliso weSEO. Ndicinga ukuba uninzi lweempawu zehyphe kwingxaki ephambili kwi icandelo lokukhangela -Ukuqwalaselwa kakhulu kwizikhundla kwaye akwanelanga ukujongana nokuzibandakanya komsebenzisi kunye nokuguqula. Abacebisi be-SEO ngebezilungisile iisayithi zabaxumi babo kudala ukuba bebejolise kwimetriki elungileyo.
Sincoma ukusebenzisa Uvavanyo lukaGoogle oluSelfowuni kwaye Ingxelo yokuSebenza kweWebmaster ukusombulula ingxaki kunye nokulungisa nayiphi na imiba engekenziwa kwiindawo zakho. Nantsi infographic ecokisekileyo evela Isithoba iHertz, Shift yangoku, kwaye Ukuchaswa.
tags: April 21ukukhonza okunamandlagoogle mobile seogoogle seouphendlo lweselfowuniimobile seoisayithi yeselulaIndawo yokujonga eshukumayoiwebhusayithi yeselfowunieziphathwayoiisayithi eziphendulayoYahlula i-URLindawo yokujonga
Epreli 13, 2015 ngo-10: 11 AM
Le yenye kuthotho lwemithombo emikhulu yokuqinisekisa abaphathi bam ukuba kufuneka sihlaziye. Kunzima ukwenza utshintsho xa yonke into ibonwa luphawu lwedola yotyalo-mali lokuqala…
Epreli 13, 2015 ngo-7: 35 PM
Ndicinga ukuba kuyamangalisa kwaye kuyahanahanisa kancinci ukuba uGoogle atyhale oku xa iinkonzo zikaGoogle ngokwazo ziphakathi kwaboni babi.
Umzekelo izinto ezifana neefonti zikaGoogle kunye nohlalutyo ziyaziwa ngokubangela ukubhloka (unikezelo) kunye nemiba yesantya.
Ngelixa ndivuma ngentliziyo yethu yonke ukuba sonke kufuneka sibe nobuhlobo kwiselula, sifuna izixhobo ezingcono kuneenkonzo ezimbini zikaGoogle ozicetyisileyo.
Umvavanyi kaGoogle wokuSetyenzwa kweMobile unika iziphumo ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwixesha losuku. Ngamanye amaxesha unobuhlobo obuhle kwaye ngamanye amaxesha awukho,
Kwaye izixhobo zikaGoogle zeWebmaster ziyaziwa ngokuhlala ziphelelwe lithemba ngeziphumo zayo.
Ngelixa unokubona ukuba ngawaphi amaphepha ebewathatha njengeselfowuni engenabuhlobo kwinyanga ephelileyo, akukho ndlela yokuyihlaziya kwaye uyazise xa uyilungisile imiba.
Kwaye ndibeke uphawu lwedatha ecwangcisiweyo kwindawo yam kwiminyaka eyadlulayo kwaye ndisalinde i-WMT ukuyirekhoda ngokupheleleyo.
Ke kuya kufuneka uzibuze, ukuba uGoogle uzakuqala ukohlwaya iisayithi, ngaba iyakuyisekela kwidatha yakudala okanye idatha yangoku?
Ngaba uGoogle uza kunika wonke umntu ithuba elifanelekileyo lokumazisa xa ezo ngxaki zilungisiwe?
Okwangoku kubonakala ngathi akunakwenzeka.
Epreli 13, 2015 ngo-11: 10 PM
Maka, andiphikisi tu. Nangona kunjalo, iiWebmasters zikaGoogle zenze umsebenzi omkhulu ekwakheni isixhobo esibanzi sokuvavanya indawo yakho. Qiniseka ukuba ubhalisela ii-Webmasters, yongeza indawo yakho, kwaye ubone iziphumo. Bakunceda ukuba uxazulule yonke imiba ukuya kwi-pixel.